WOWOW Centreset Bathroom faucet enePop-Up yeDrain Assembly
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela / WOWOW Centreset Bathroom faucet enePop-Up yeNdibano yokuCoca
ikaliwe 4.85 Kwi-5 esekelwe kuyo 26 amanqaku umthengi
(26 ncomo ngumthengi)
Amazon US I-Amazon CA
Iinkcukacha ze faucet yegumbi lokuhlambela:
I-4-kwiziko lokubeka indawo
I-AdA ehambelana nempahla iyaphatha lula ukusetyenziswa
Ukuphakamisa isibonda kufakiwe
2321400 imiyalelo yokufaka
Khetha ilizwe Åland IslandsAfghanistani AlibhaniyaAljeriyaAmerican SamoaAndorraAngolaAngwilaAntarcticaAntiguwa neBarbuda ArgentinaArmeniya ArubhaOstreliyaOstriya AzerbayijaniBhahamasBhareyiniBhangladeshiBarbadosBhelarusiBelauBheljiyamBelizeBeninBhermudaBhutanBholiviyaBonaire, uSt. Eustatius noSabaBhozniya neHerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBruneyiBhulgariyaBurkina FasoBurundiKhambodiyaKhameruniKhanadaKheyip VerdeCayman IslandsIriphabliki yaseAfrika eseMbindiniTshadChileiTshayinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsKholambiyaKhomorosCongo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)Isiqithi saseKhukicosta RicaKhroweyishiyaTyhubhaCuraçaoSayiprasi Umphakathi waseCzechDominikhaJibhutiDominikhailizwe lasedominicEkhuwadoEgyptEl Salvado Ekhwithoriyal GiniEritreaEstoniyaYuthophiyaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlendFransi French GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiyaGeorgiaJemani GhanaGilbhralthaGrisiGrinlendGrenadaGuadeloupeGuamGuatemaleGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHondurasHong KongHangariAyisilendIndiya IndoneshiyaIranIrakhAyalendIsle of ManSirayeli ElamaTaliyaneIvory CoastJameyikhaJaphanJerseyJordanKazakhstanKhenyaKiribatiKhuweyithiKhirgizstaniLaosLathviyaLibhanonLesothoLayibheriyaLibhiyaLikhtensteyinLithuwaniyaLaksembhegMacaoMadagaskaMalawiMaleyishiyaMaldivsmaliMaltaIsiqithi saseMashalMartiniqueMorithaniyaMorishiyasiMayotteMekhsikhoMikhroneshiyaiMoldaviaMonakhoMongoliyaMontenegroMontseratMorokhoMozambikhMyanmarNamibhiyaNauruNephalelamaDatshi New CaledoniaNyu ZilendNikharaguwaNayijaNayijeriyaNiueIsiqithi saseNofolkhemantla ekoreaNorth MacedoniaIsiqithi saseMariyana eseMantlaNoroweOmanPhakistanTerritory TerritoryPanamaGini eNtsha yasePapuwaParaguayPeruFilipayinziPitcairnPholendPhotshugoiPuerto RicoKhwathaReunionRomaniyaRhashiyaRwandaSawo Tome nePrinsipeSaint BarthélemySeyint HelenaSeyint Kitsi neNevisSeyint LushiyaSaint Martin (inxalenye yeDatshi)Saint Martin (inxalenye French)Saint Pierre and MiquelonSeyint Vinsent neGrenadinsSamoaSan MarinoISaudi ArabiaSenegalserbiaSeytshelsSierra LeoneSingapho SlovakiyaSloveniyaIsiqithi saseSolomonSomaliyaMzantsi AfrikaIziLwandle zaseJeorgia / iSandwich Islandsemaznstie ekoreaSouth SudanSpeyinesri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwaziniSwidenSwizalendSiriyaTaiwanTajikistanThanzaniyaThayilendi East TimorTogoTokelawuTongaThrinidadi neThubhagoThunishiyaikarikuniTurkmenistaniTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaYukreyiniIUnited Arab EmiratesUnited Kingdom (UK)EUnited States (US)I-United States (iUnited States Minor Outlying Islands)UruguayUzbhekistanVanuatuIVaticanVenezuelaVietnamIslands Virgin (British)Islands Virgin (US)Wallis FutunaWestern SaharaYemenZambiyaZimbabwe
Isikhephe sokuhlambela isitya sokuntywila esingena-2320400 soze sivelise iingxaki ezivelayo.
Umbane ogqityiweyo wokugqitywa, isitofu sokuhlambela sokuqubha kwisitya asikaze sifumane oxidization.
Ukudityaniswa okuPhuculweyo kunye neSeal Pop-up yokuhlanganisa umdiza kunye ne-cUPC yemvume yokuhanjiswa kwelayisenisi ebandakanyiweyo.
Indawo ephezulu ye-arc ibonelela ngokucacileyo ngakumbi kunye nokufikeleleka okukhulu kwisinki.
I-3-hole yomngxunya ene-4-intshi yesiseko sesiseko sofakelo ngokulula. Ubungakanani beHole: 30-36mm; Ubunzima beMax Deck: 30mm.
Izibambo zambini zokuhambisa okulula kunye nolawulo lobushushu.
Ulwakhiwo lwezinto eziphambili ze-premium ezigqityiweyo ze-nickel zokuhlala zihlala kwaye zithembekile.
I-SKU: 2321400 iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela tags: 2 Bamba, 4 intshi, Uqhekeze uNickel
12.17 x 8.78 x 3.07 intshi
Zinc ingxubevange / Stainless intsimbi / Brass
Amanzi abandayo / ashushu
Ibhobho yokuhlambela / ukuphuma kwamanzi
Kuqala, ndineminyaka engama-80 ubudala kwaye ayingombombazi. Elona candelo linzima leprojekthi kukususa oompompo bakudala. Iipompo ezintsha ze-WOWOW zikumgangatho ophezulu, amaxabiso agqwesileyo, anomtsalane, kwaye yonke into efunekayo kulo msebenzi ifakiwe eyenza umsebenzi ube lula kakhulu kwi-DIY's. Ndingacebisa kakhulu le mveliso.
Ijongeka intle ngenqaku lamaxabiso. Ndinqwenela ukuba igama lebrendi lingabonakali, kodwa ayisiyonto inkulu kakhulu. I-nickel ebrashiweyo ihambelana nezinye izinto ze-nickel endizibhulileyo. Ukufakwa kwakulula kwaye onke amalungu afakiwe.
Ukufakwa ngokuthe ngqo. Izibambo zihamba kakuhle, zibukeka zintle ngokwenene. Ukucoca okungaphezulu ngenxa ye-arch ephezulu kwitepu, kunye nokuvumela igumbi elingaphezulu lokwenza izinto esinkini (ukuhlamba izandla iimpahla, ukuhlamba iibrashi zamazinyo, njl. Njl. Kuthetha izinto ezingaphantsi ezingena ekunxibelelaneni nalapho kuphuma khona amanzi, imveliso ecocekileyo.
Ndenze uvavanyo oluninzi kwiifompo kwiivenkile ezimbalwa zokuphucula amakhaya kwaye kufuneka nditsho ukuba le faucet ibonakala yenziwe ngcono kunaleyo ibiza kakhulu. Ndamangaliswa. Inzima kakhulu kwaye iivalves zivula kakuhle kwaye zisondele ziziva kamnandi ngokunjalo. Ndichukumisekile ukuza kuthi ga ngoku. Ndiza kuthenga iiseti ezimbalwa ngakumbi kwezi kungekudala.
ezinokuthenjwa, ezinesitayile, ezenziwe kakuhle itompu. Kwakulula kakhulu ukuyifaka kwaye ndinemiyalelo nje xa kunokwenzeka uyidinge. Ndikulungele uku-odola ngaphezulu ukuba ndibuyisele ezinye iipompo zangasese ekhayeni lam. Ngokuqinisekileyo lixabiso. Kubonakala ngathi iipompo ezinexabiso kodwa zitshiphu kakhulu kodwa khange bancame ukwakhiwa kwetephu.
Ifayiphu ikhangeleka intle. Ndiza ku-odola enye yesibini enye indlu yangasese. Njengoko benditshilo, ndiyayithanda itompu kwaye ngoku ndinomjelo omtsha, ngovuyo ndinika le mveliso Iinkwenkwezi ezintlanu.
Emva kokufunda uphononongo kunye nokuthelekisa iimveliso sathengile le nto yokuhlambela ukuze sithathe indawo yethu endala. Kwakulula kakhulu ukuyifaka kunye noyilo olulula kakhulu kulula kakhulu ukugcina ucocekile. Siyithengile le nto ngesilivere esinebrashi le nto ibonakala intle kwigumbi lethu lokuhlambela.
Kutshanje siye sathenga indlu kwaye kufuneka sifake endaweni yoompompo. Ndithenge le nto kwaye yayilungile. Ndize nayo yonke into endiyifunayo. Kulula ukuyifaka kwaye ijongeka intle kakhulu.
Andazi ukuba ndithini enye into… kodwa ndiyayithanda le faucet! Olu hlaziyo lolwam lwam lwesithathu kwezi. Ndithenge eyoku-3 ngaphezulu konyaka odlulileyo kwaye isomelele kwaye yomelele kwaye ikunye nabantwana endlwini! Yayibambe kakuhle kangangokuba ndathenga eye-1. Ndizakufumana into eyahlukileyo kwisinki yokuhlambela, kodwa ukusukela le faucet indilunge kakhulu, kwaye ijongeka ibiza kakhulu, ndiye ndacinga ukuba mandinamathele kuyo! Kwaye ndiyavuya ukuba ndenzile. Ukuba bendinesinki se-2, bendiya kuyithenga kwakhona!
Ukuhanjiswa okukhawulezayo kunye neeyunithi zisebenze ngokugqibeleleyo. Babeluphuculo olukhulu ukuya kwi-20 yr indala ye-lever endala, iipompo zeplastiki. I-shutoff yomelele kakhulu ngaphandle kokuthontsiza nantoni na. Ngexabiso, andiboni ukuba umntu angaphulukana njani nokuthenga ezi mpompo.
Ndonwabe kakhulu ngokuthengwa kwale mpompo yangasese. Umgangatho ubalaseleyo. Kwakulula kakhulu ukuyifaka kwaye yayiquka zonke iindawo ekufuneka uzenzile. Ijongeka intle kakhulu kwaye iyahambelana kakuhle nazo zonke ezinye izinto ezenziweyo ze-nickel kwigumbi lokuhlambela lam. Andithandabuzi ukuba le faucet iya kuhlala iminyaka emininzi.
Itepu encinci kunye nendawo yokusebenza yangasese.
Ilingana ngokugqibeleleyo namampunge lawo.
Ngokwenyani ufuna kuphela izandla zakho kunye nesitshixo esihlengahlengiswayo. Iiplumbers putty kunye netape zazingafuneki konke konke, akukho kuvuza nantoni na. ijongeka intle kwaye intle.
Iimpompo ezintle, jonga kakhulu. Ndifuna izibambo ezahlukileyo ezishushu / ezibandayo njengoko ndingaqinisekanga ngesiphatho esinye esingavuziyo. Ngale ndlela ndinokuqinisekisa ukuba omabini amacala akhuselekile ngokuchanekileyo. (usebenzisa iteyipu yetape ngokuqinisekileyo) Ukufakwa ngokulula. Isebenza ngokugqibeleleyo. Izibambo zijika njengomoya. Yanela isinki yam ngokugqibeleleyo. Kwaye babebiza amaxabiso. Ndithenge ezimbini.
Kuhle kakhulu ukuba sathenga ezimbini, enye kwigumbi lokuhlambela ngalinye. Intle. Ukujonga okuqinileyo. Ndiyayithanda indlela ephezulu ngayo itepu yokugcwalisa i-humidifier yethu.
Le itephu enkulu ngexabiso elihle! Kuthathe utata malunga nemizuzu engama-30 ukwenza ompompo aba-2. Ndiyalele isinye kwisithathu seendwendwe zethu kwaye ndisalinde umyeni wam ukuba athabathe enye. Khange sibe nayo imicimbi ukuza kuthi ga ngoku. Ndiyayithanda i-pop up drain!
Oku kubonakala kukuhle kwaye ixabiso lilungile. Nditshintshe zonke iisinki kwiindawo zam zokuhlambela ngezi (8 zizonke). Ijongeka intle kwaye ufakelo lwalungangqalanga kumfana onje ngam owenza umsebenzi wokulungisa imibhobho yamanzi okokuqala. Kuza nesiciko esifanelekileyo esikwabizwa ngokuba yi-nickel kwaye umgangatho wee hoses ulungile.
Le tephu ilungile. Yenziwe kakuhle, kulula ukuyifaka, kwaye isebenza kakuhle. Uyilo lwe-pop-drain kulula kakhulu ukulifaka kunendlela yakudala yokuhambisa amanzi ngokunjalo. Ndiza kufumana ezimbalwa ngakumbi kuyo yonke indlu.
Kulula ukuyifaka. Ijongeka intle. Akukho nto intle kodwa ikhangeleka intle. Kulula ukuyisebenzisa.
Ndithenge le faucet yendlu yethu yerenti kwaye unyana wam wayifaka. Akazange enze ufakelo lwemipu kodwa wafumanisa ukuba kulula kakhulu kwaye iyakhawuleza. Kwaye kujongeka kulungile.
Ezi ziimpompo ezintle kunye nexabiso elifanelekileyo. Akukho nto intle kakhulu kodwa lixabiso elilunge ngokwenene ukuba ujonge ukuphucula izindlu zakho zangasese. Kwakungekho nzima kakhulu ukuyifaka kwaye ibonakala intle kwaye isebenza kakuhle
Ndithenge le nto ndicinga ukuba ndiza kuyifumana into endiyihlawuleleyo, kwigumbi lokuhlambela elingaphezulu. Ndifumene indlela engaphezu kokuhlawulwa kwam. eneneni ijongeka kwaye iziva ifana negama elibiza igama lophawu endilithengileyo kwigumbi lokuhlambela eliphambili. Ndonwabe kakhulu. Ndiza kuthenga kwakhona, ukugweba ukusuka kumgangatho wobomi ixesha elide ngaphandle kokuba ndifuna enye into.
Ngaphandle kwexabiso elifanelekileyo, le mveliso igqithile kulindelo lwam. Kulula kakhulu ukuyifaka kwaye iyasebenza kwaye ijongeka intle.
Sitshintshe zonke iipompo kuzo zonke izindlu zethu zokuhlambela ngezi. Kulula ukuyifaka-kulula kakhulu kunale yokuqala esiyithengileyo kwivenkile yehardware yendawo yethu! Ukuphakama okukhulu kumbhobho wokuhlambela nawo.
Umyeni wam uzifakile ngokukhawuleza oku, eyona nto inzima kukususa ezakudala. Zintle kwaye zinzima zentsimbi, umbala ulungile. Izibambo zincinci encinci, kodwa ukuphakama kwetampu kuyenzela yona. Ezi zilungele ukukwazi ukuhlamba ubuso bakho kwisinki ngaphandle kokubeka ubuso bakho ezantsi. Sathenga enye yokuhlambela amakhwenkwe ethu, sayithanda kakhulu sathenga ezimbini senzela inkosi yethu.
Le yimveliso eyenziwe kakuhle kakhulu, andisoloko ndenza uphononongo kodwa le mveliso ibibalasele kuba iqulethe ithumbu elitsha elomeleleyo eliya kumbhobho. Oku kwakungalindelekanga kwaye kwaxatyiswa kakhulu. kwakulula ukuyifaka kwaye ayivuzi.
WOWOW Bathroom Sink faucet Brunch Nickel Wides ...
WOWOW Igumbi lokuhlambela leseti yeTouch
WOWOW Bathroom faucet nge Swivel Spout Black
Wowow Centreset Bathroom faucet ene Drain Asse ...
QHAGAMSHELANA NATHI Idilesi yase-China: 119Th Berth, 1st Floor No.21 Yanjiang East Road Shui Kou Idolophu Kai Ping City Guang Dong Iphondo China +86 19927601787 (9 am-18 pm GMT + 8) I-imeyile: sale@wowowfaucet.com
Ubunini bamalungelo agcinwe.
I-Chrome ebanzi ye-2-Handle High-Arc Bathroom Faucet iUSD59.99
WOWOW Matte Black Bathroom faucet 4 Inch iseti yeziko iUSD45.88
I-Wowow ephezulu I-Rated Tola i-Faucets yeKhitshi enye iUSD59.98
WOWOW Centreset Bathroom faucet ene-Drain Assembly Matte Black iUSD49.98
WOWOW Igumbi lokuhlambela leseti yeTouch iUSD45.96